120 qof oo indho fiiqid iyo daweyn loogu sameeyay Jowhar
27 May, 2013 JAWHAR
Dad gaaraya 120 qof ayaa ka faa’iideystay mashruuc indho fiiqid iyo daweyn isugu jira oo si lacag la’aan looga fuliyay degmada Jowhar ee gobolka Shabeelada Dhexe.
Mashruuca oo socday saddex maalin ayaa waxaa ka faa’iideystay bukaano ka kala yimid degmada jowhar iyo deeganada ku dhow oo helay diiwaan gelin, baaritaan iyo daawo lacag la’aan ah.
Mashruucan daweynta iyo fiiqida indhaha ee lacag la’aanta ah oo lasoo gabo-gabeeyay 14 May ayaa waxaa fuliyay saddex dhakhtar oo ku takhasusay xanuunada indhaha iyo afar kalkaaliyaal ah oo wada Soomaali ah.
Dhakhtar Maxamed Salaad Kheyr oo ka mid ah dhakaatiirta howsha fulisay ayaa raadiyaha Ergo u sheegay in 25 ka mid ah bukaanada ay la kulmeen indhaha loo fiiqay oo uu aragu usoo noqday. Dhakhtar Maxamed Salaad Kheyr wuxuu intaa ku daray in 95 bukaan oo kale ay siiyeen dawooyin xanuunada indhaha iyo kuwo kaabaya araga qofka.
Gudoomiyaha Ururka Indhoolayaasha gobalka Shabeelada Dhexe Cali Sheekh Rashiid ayaa isna raadiyaha Ergo u sheegay in 17 ka mid ah bukaanada la kulmay dhakhaatiirta laga bixiyay caay indhaha uga jirtay oo araga ka qarisay. 17 kale ayaa qaliino lagu sameeyay looga guray hilib indhaha ka saarnaa.
Howsha indho fiiqida iyo daweynta oo lacag la’aan aheyd ayaa waxaa wadajir u fuliyay Hay’adaha Nacfi iyo Al-absaar, waxaana lagu qabtay xarunta dugsiga hoose iyo dhexe ee Buulo-Baleey ee degmada Jowhar.
2007-dii bukaanadii ugu badnaa oo gaarayay 947 qof ayaa adeegyo indho fiiqid ah oo lacag la’aan aheyd loogu fuliyay isbitaalka weyn ee degmada Jowhar. 7 jeer ayaa wixii sanadkaa ka dambeeyay laga fuliyay degmada adeegyo indho fiiqid iyo qaliino noocaan ah. Laakiin mashruucaan waxaa uu ahaa midkii ugu horeeyay oo bixiya diiwaan-gelinta bukaanada oo lacag la’aan ah iyo weliba daawooyin bilaash ah.
Horey bukaanada waxaa looga qaadi jiray $10 oo diiwaan gelin ah si ay ula kulmaan dhakhaatiirta daweynta indhaha ee ka socota hay’adaha fulinayay adeegyada lacag la’aanta ah. Bukaanada ayaa sidoo kale iibsan jiray dawooyinka loo qoro.